somewhereondearth 181 days ago
khoi k 181 days ago
makar rashi 181 days ago
khoi k 180 days ago
Deep 179 days ago
khoi k 179 days ago
AprilShower 176 days ago
Deep 37 days ago
The Thamelean 36 days ago
khoi k 35 days ago
soundByte 34 days ago
soundByte 33 days ago
Visitor is reading "Shoka" Ode to Nepal. Tribute.
Visitor is reading best HD video editing software
Posted on 11-23-19 6:34 PM [Snapshot: 356] Reply [Subscribe]
दिप ब्रोलाई ठ्याक्कै ५ बर्ष पछि देख्न पाउँदा, मलाई नि खुसि लाग्यो र हार्दिक अभिनन्दन टक्र्याउन मन लाग्यो !
Posted on 04-20-20 11:05 PM [Snapshot: 3872] Reply [Subscribe]
दिप ब्रोको कथा पढेर खुब रमाइलो लाग्यो ! उहिले उहिले काठमाडौँ बाट सिक्किम हस्टेलको यात्रामा , नाइट बसको सवारी लिंदै काकंडभित्ता गइन्थ्यो ! नाइट बसको यात्रा नि सार्है रमाइलो .... तर त्यो थानकोट बाट नागढुंगा घुम्ती तल झर्दा चैँ सानोमा मेरो सांस नै रोकिन्थ्यो !
साउण्ड बाइट ब्रो ... पुरानो इउजर पो हुनु हुन्छ ... मैले त् हिजो आज मात्र नोटिस गरेको ब्रो लाइ ! 🙈
Last edited: 20-Apr-20 11:04 PM
Posted on 04-23-20 3:08 AM [Snapshot: 4198] Reply [Subscribe]
साउण्ड बाइट ब्रो ....
दिप ब्रोको बसको यात्राको कथाले ... मैले केहि बर्ष अगाडी काठमाडौँबाट त्रिशुली बगरको एउटा गाउँमा हानेको बस त्रिपको प्रसंग जोड्न मन लाग्यो ! यो यात्रा चैँ मेरो फर्स्ट यात्रा थियो त्यो गाउँमा ! गाउँ चैँ मेरो भाइको थियो ! उहा भाइलाइ मैले साझाले गर्दा नै चिन्न पुगेको थिए !
कुरो .... म बिद्यार्थी हुँदा खेरिको ... एक दिन साझा सर्फ गर्दा ... साझामा पोस्ट गरेको एउटा भिडियो ....एभीनिउज टि.भीको "खबर भित्रको खबर" भन्ने प्रोग्राममा त्रिशुली नदीको तुइन चुँडेर केहि व्यक्तिहरु दिवंगत हुन् भाको खबर प्रसारण गरेको थियो र उहाहरु मध्य अभाग्यवस भाइको बुवा नि पर्न भाको थियो ! त्यो भिडियोमा भाइको र परिवारको दर्दनाक पिडाले मेरो आत्मा छिया छिया भाको थियो ! तुरुन्तै नेपालमा मैले आफन्तहरुलाइ कन्ट्याक्ट गरि भाइको बारे जान्न अनुरोध गरे !
भाइ भर्खर एस एल सी सक्काएर बसेको थियो र अब कसरि आफ्नो पढाइ अगाडी बढाउने र अब मेरो सपना सबै चुर भयो भनि आफ्नो पिडा भिडियोमा उनले पिरोली रहेको थियो ! उहाको पढ्ने इछ्यालाइ मैले निरन्तरता दिने अठोट गरेको थिए र भाइलाइ काठमान्डू झिकाएर हाइ स्कूल पढाउँन मैले निर्णय लि सकेको थिए !
अन्तमा भाइको ठेगाना पत्ता लगाए ! उहाको स्कुलको हेडमास्टरको सल्लाहमा भाईले काठमाडौँ नआइ आफ्नै गाउँको हाइ स्कुलमा पढ्ने निर्णय लिन भो !
मेरो यो भ्रमण चैँ भाईको कलेजको एक बर्षको फिज भर्न जाँदाको हो ! अहिले मेरो भाइले ब्याचलर पनि सक्काएर राम्रो जब मेरै अङ्कलको ठमेल स्तिथ स्टोरमा काम गरि राका छन ! तेती मात्र नभई भाइले आफ्नो भाई र बैनाहरु सबैलाइ आफ्नै कमाइले पढाए पनि ! ठमेलमा काम गर्ने भाकोले बिदेशीहरुसंग पनि राम्रो चिनजान गरि ... बिदेशी सहयोग आफ्नो गाउँमा पनि पुर्याएका छन् ! म त सार्है नै प्राउड फिल गर्छु उहा प्रति ! मेरो एउटा सानो मदतले आज मेरो भाइले दुनियालाई मदत गरि राका छन् ! नेपाल जाँदा सके सम्म भाइको गाउँमा गइ आमाले बनाउन भाको खाना खान जाने गर्दछु !
साउण्ड बाइट ब्रो फुर्सदमा मेरो यो बस यात्राको भिडियो हेर्नुस ल ! 😌